အိုဘယ့် …အရှေ့ကျွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » အိုဘယ့် …အရှေ့ကျွန်း
Posted by ムラカミ on Sep 13, 2012 in Critic, Cultures, Think Different | 26 comments
ဂျပန်နိုင်ငံလို့ ပြောရင် ..ကျနော်တို့ မျက်စိထဲမှာ ကီမိုနို ချယ်ရီပန်း မော်တော်ကား နဲ့ စက်ရုပ်တွေ ကို အရင်ဆုံး
မြင်ယောင်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါတွေဟာ ..ဂျပန်ရဲ့.. brand elements တွေ …. (ဒေါက် … စိတ်ထိန်းဟဲ့…
ဒါ …မားကတ္တင်း ပိုစ့် မဟုတ်ဘူး … ဟတ်ကဲ့ ဟတ်ကဲ့ ..)
အဲလေ.. ဆက်ရရင် …
ဆိုလာ အာအိုးအိ ၊ လိကို ကာဝါဂူချိ ၊ အိုဇာဝါ မာရီယာ .. တို့ကို ပြေးမြင်သူလည်း ရှိမှာပါ … ( ဖြန်း .. ညှီပြန်ဘီ…
ဒါ ဂဇက်ဟဲ့ ..ချက်ကြီး မဟုတ်ဝူး… ဟတ်ကဲ့ ဟတ်ကဲ့ ..)
ကဲ ပါ တခြားဘက်ကပြောပါ့မယ်..
ကီရင်း ..အဆာဟိ .. အဲဘိစု ဆက်ပိုရိုနဲ့ ..ဆန်တိုရီ …( ခွပ် …မိုးမှမလင်းသေးဘူး ..
သောက်ချင်ပြန်ဘီလား … ဘယ့်နှယ့် …လေပြိုအောင် ….. ဟတ်ကဲ့ ..ဟတ်ကဲ့ ..)
တဖက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်း တိုယိုတာ ၊ ဟွန်ဒါ ၊ နစ်ဆန်း ၊ ဒိုင်ဟဆု၊ ဖူဆို
(ဒုတ်… မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ …. ကားရောဂါ ထပြန်ပလား … လမ်းပြောင်းပြန်တွေ
မောင်းပီး .. ဒဏ်ငွေ ကျွန်ခံ ဆောင်ချင်လို့လား …. ဟတ်ကဲ့ ဟတ်ကဲ့ ..)
သည်လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ဖြင့် … ဆိုနီ ၊ တိုရှီဘာ၊ ရှပ် ၊ ပန်နာဆိုးနစ် ၊ဂျေဗီစီ
(ဖြောင် … အဲဒါတွေ နောက် လိုက်လို့ မပီးသေးဘူးလား .. ချဉ်ဇယာ … စုမယ် ဆောင်းမယ်
တော့မရှိဘူး … မိန်းမကျ ယူချင်တယ် အော်နေ…. ဟတ်ကဲ့ ..ဟတ်ကဲ့ ..)
ဂျပန်နိုင်ငံ ဆိုတာ အာရှအရှေ့ဖျားက သီးသန့်ဆန်တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ..
ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းအရ ..မြန်မာပြည် တ၀က်လောက်သာ ရှိသော်ငြား ..လူဦးရေမှာ ..
မြန်မာပြည်လူဦးရေ ၂ဆ ရှိလို့ ..အကြမ်းဖျင်း လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ ၄ဆရှိတဲ့ နေရာ တခု
အဆိုပါ ကျွန်းက လူတွေရဲ့ ..နိုင်ငံခြားသားတွေကို ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု အကြောင်း နည်းနည်း တူးဆွချင်လို့ပါ..
မြောက်များလှစွာသော ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ..နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့ အခွင့်အရေး မရကြပါဘူး..
ဒါကြောင့် လားတော့ မသိ ..သူတို့ဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ..အမူအကျင့်ကို
အတန်ငယ် အပြောင်းအလဲပြုပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံလေ့ရှိပါတယ်…
သည်ကိစ္စ အကြောင်းကို မတူညီတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီး က နိုင်ငံခြားသားများဟာ မတူညီတဲ့ အမြင်နဲ့ MADAME RiRi
ဆိုတဲ့ website မှာ အခုလို ဖြေဆိုထားကြပါတယ်…။
ထိုအထဲမှ အချို့ ဖြစ်ပါတယ်
ကျနော်ဟာ ဂျပန်ပြည်မှာ ၃နှစ်ခွဲ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ပုံမှန် ဂျပန်စကားပြော ကို တတ်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်လိုမျိုးတွေဟာ လူတဖက်သား ( ဂျပန်လူမျိုးပုံမပေါက်တဲ့ လူတွေကို) ဘယ်လို ပြုမူ ဆက်ဆံမယ်ဆိုတာ
တင်ကြို ဆုံးဖြတ် သတ်မှတ် ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်.. သူတို့ဟာ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ဟာ ဂျပန်လို
မပြောတတ်ဘူး …လို့ ယူဆထားလေ့ ရှိကြသူတွေ ပါ …။ ထမင်းဗူး အရောင်းဆိုင် က စာရေးတစ်ယောက်ဟာ
၃နှစ်ခွဲလုံးထိတွေ့ဆက်ဆံ နေရတာတောင် ကျနော်ဟာ လုံးဝ ဂျပန်လို မတတ်သလို ပြောဆို ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်.
သည်လိုပြောခဲ့တာကတော့ ဘယ်လ်ဂျီယမ် လူမျိုး အမျိုးသားတယောက် ဖြစ်ပါတယ်…ဆက်ပါဦးမယ်
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး စနစ်ဟာ အဓိကအားဖြင့် ဂျပန်ဘာသာ အခြေပြု ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ …
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံ တဲ့အခါ ပင်ကိုယ် သဘောသဘာဝ အတိုင်း
ပကတိ မဖြစ်တာ ကို တွေ့ရပါတယ်.. သူတို့ဟာ အခြား နိုင်ငံ အခြား လူမျိုးတွေအကြောင်း လေ့လာ သင်ယူမှု
နည်းပါးတယ် မဟုတ်လား …။
ဒါကတော့ အမေရိကန်လူမျိုး အမျိုးသမီး တယောက်ရဲ့ မှတ်ချက်စကားပါ..။
အစ တုန်းကပေါ့ ..ဂျပန်လူမျိုးတွေ ကျနော့်ကို တူ ကိုင်တွယ်တာ ..ကျွမ်းကျင်ကြောင်း .. ဂျပန်စကားပြော
ပိုင်နိုင်ကြောင်း ချီးကျူး ကြတာ ကျနော် အလွန်နှစ်သက် ခုံမင်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတဲ့အခါ
ဒါဟာ ခွဲခြား နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတာ တစ်မျိုးပါလား လို့ ..ခံစားလာမိပါတယ်…။
ဒါကတော့ သြဇီ အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံပါ..။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ တရုတ်မ တယောက်ကတော့ အခုလို ပြောသွားပါတယ်.. ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ..ဂျပန်နဲ့ မတူသူ လူတယောက် ကိုတွေ့ရေ ..နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက် အဖြစ်
ဆက်ဆံလေ့ရှိပါတယ် ..ကျမ ကိုတောင် တရုတ် ထက် ပြင်သစ် ပိုဆန်သူ အဖြစ် ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။
ဂျပန်စကားလုံး နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာဟာ ..လူဖြူ ..ဒါမှမဟုတ် လူမည်း အဖြစ် ပိုမို ညွှန်းဆိုသယောင်ပါပဲ။
ဒတ်ခ်ျ အမျိုးသားတယောက်ကတော့ အခုလို မတူတဲ့ အမြင်ရှိပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်တွေက ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေဟာ နိုင်ငံခြားသား တွေကို ဂျပန်လူမျိုး အချင်းချင်းထက်
ပိုပြီး ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူ ဆက်ဆံပါတယ် .. ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့လည်း ..ဘောလုံးအသင်းတွေက
လာဘ်ကောင် အရုပ်လို ပုံစံမျိုး အရေးပေးဆက်ဆံခံရသလိုပါလား လို့ ခံစားရပါတယ်။
တကယ်တမ်း ပြောရရင် .. တခါတခါ စိတ်ဆိုး စိတ်ပျက်စရာပါပဲ …ဂျပန်တွေ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း တခုခုကို ပြလာပြီး
ဒါမျိုး အမေရိကားမှာရော ရှိလား ဟင် လို့ မေးတတ်တဲ့အခါမျိုးပါ … ကျနော့်မှာ.. တတ်နိုင်တာဆိုလို့
ကျနော် အမေရိကန် မဟုတ်ဘူးဗျ လို့ ဖြေစရာပဲရှိပါတယ် လို့
ဒိန်းမတ် နိုင်ငံသား က ပြောပါတယ်။
ကျနော့်ကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး အဖြစ် ပြောဆို ဆက်ဆံတာကို ကျနော် နှစ်သက် ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ ဂျပန်စာ လေ့ကျင့် ပြောဆို ရာမှာ ဘာဖိအားမှ မရှိဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို ဂျပန်လူမျိုးတွေ က နိုင်ငံခြားသားတယောက် သူတို့ ဘာသာစကား
ကိုလေ့ကျင့်သင်ယူမယ်လို့ သိပ် မမျှော်လင့်ထားကြဘူး မဟုတ်လား …
သည်လိုဆိုခဲ့တာကတော့ .. ဘရာဇီးလ် အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ ခင်ဗျားဟာ ဂျပန်လူမျိုး တိုင်းဟာ ချိုသာယဉ်ကျေးမယ် လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့မိရင် …
ထိတ်လန့်အံ့သြမှုကို ကြုံတွေ့ရမှာ အမှန် ဖြစ်ပါတယ် … ကျနော့် အမြင်ကတော့ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ
ရှိသမျှ လူတိုင်း ဟာ ချိုသာယဉ်ကျေးတာ ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူး ..
ဒါဟာ အီတာလျှံ အမျိုးသား တယောက်ရဲ့ မှတ်ချက် စကားဖြစ်ပါတယ်…
သင် အခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါ အများစုသော ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အကူအညီ ပေးနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး..
ဘာကြောင့်လဲဆို နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာ ဂျပန်မှာ လူနည်းစု မဟုတ်လား .. ( နိုင်ငံခြား ဘာသာ တတ်ကျွမ်းသူ
သည်လိုမျိုး စကော့အမျိုးသား တယောက်က ဆိုထားပါတယ်…။
အမေရိကန် အမျိုးသားတယောက်က တော့ သည်လိုမြင်ပါသတဲ့..
တခါတလေ ကျနော် ဂျပန် ရုပ်ရှင်တွေ နဲ့ ကာတွန်းတွေကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါ …နိုင်ငံခြားသား ဇာတ်ရုပ်တွေကို
အများအားဖြင့် လူညံ့တွေ အဖြစ် သရုပ်ဖော်လေ့ ရှိကြပါတယ်… ။ ဒါဟာ ကျနော့်အတွက် မနှစ်မြို့စရာဖြစ်ပြီး
ဂျပန်တွေ အများစုဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေကို သည်လို မြင်တတ်ကြပါလားလို့ ..တွေးတောစရာဖြစ်စေပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ .. အမေရိကားနဲ့ ဥရောပ လိုမျိုး ပြောင်းရွှေ့ အခြေချသူတွေ များပြားတဲ့ တိုင်းပြည်တခု မဟုတ်ပါဘူး
သည်တော့ …ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ သာမကဘဲ ..အတွင်းစည်းအပြင်စည်း ..ခွဲခြားစဉ်းစားပုံအရ
သူစိမ်း လူ ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးအချင်းချင်းတောင် ဆက်ဆံရာမှာ အခက်အခဲ တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ နောက်ထပ် အမေရိကန် အမျိုးသား တယောက်ရဲ့ မှတ်ချက်ပါ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ သူတို့ ပင်ကိုယ် အမူအကျင့် ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ
တတ်တာဟာ သူတို့ဟာ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း စိတ်ပါဝင်စားလို့
လို့ အင်္ဂလိပ် အမျိုးသား တယောက်ကတော့ မှတ်ချက်ချသွားလေရဲ့..။
ဂျပန်လူမျိုးတိုင်းတော့ ..သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘော သဘာဝ ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကို
ထိတွေ့ဆက်ဆံလေ့မရှိပါဘူး .. ဥပမာ အားဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျပန်လူမျိုး တွေ ဆိုပါတော့
သူတို့ ဆိုရင် ဂျပန်အချင်းချင်း ပြောဆို ဆက်ဆံသလိုကို နိုင်ငံခြား သား တယောက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း
ဆက်ဆံနိုင်ကြပါတယ်. .. ပြောရရင် ဒါဟာ ..နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ့် ဂျပန်တယောက်ရဲ့
နိုင်ငံရပ်ခြား ..( နိုင်ငံခြားသား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု) အတွေ့အကြုံ အဆင့် ပေါ်မူတည်မယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်..
ဒါကတော့ မျှတတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အမေရိကန် အမျိုးသား တယောက်ရဲ့ မှတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်…
ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကတော့ …
တကဖက်လူ နေရာကနေ ၀င်ပြီး စဉ်းစားပေး ခံစားပေးတတ်တဲ့ အကျင့် ကို တွေ့ရလို့ ..
ကျနော်တို့ လူမျိုးနဲ့ တူရန်ကော ဆိုပြီး နှစ်သက် သဘောကျပါတယ်..
တပြိုင်တည်းမှာ .. စည်းကမ်း သေ၀ပ်တာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နဲ့ ပါဆင်နယ်ကွဲပြား တာကို တွေ့ရပြန်တော့
ကျနော်တို့ လူမျိုးနဲ့ မတူရန်ကော ဆိုပြီး လေးစားမိပြန်ပါတယ်..
နောက် .. ဘာသာစကား S(ubject) + O(bject) + V(erb) ကို စီတဲ့ အစီအစဉ်
မြန်မာစာ သဒ္ဒါ နဲ့ အတူတူပဲ မို့ …စကားလုံးတွေသာ အလွတ်မှတ်မိနေပါစေ ..
ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့ ..ဂရမ်မာ စည်းကမ်းတွေ အသစ် ထပ်မမှတ်ရလို့ …နှစ်သက်မိပြန်ပါတယ်..
တပြိုင်ထဲမှာ ..ရှေးရှေးက တရုတ်ပြည်က သွားသင်လာတဲ့ ခန်းဂျိ ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ တပုံတခေါင်းကို
စာရေးဖို့အတွက် စာလုံးတလုံးထဲကိုပဲ စုတ်ချက် အရေအတွက် ၊ ဂျပန်အသံထွက် ၊ တီလုပ် အသံထွက်
ဒါတွေမှတ်ရပြန်တော့ စိတ်ထိခိယက်ရပြန်ရော …
ချစ်တာမုန်းတာ ကျောသား ရင်သား ဒါတွေ မပါဘဲ အလုပ်ကြိုးစားကြတာတွေ့တော့ ..
အားကျနှစ်သက် ပေမယ့် ..
စားလည်းအလုပ် သွားလည်းအလုပ် အိပ်တောင် အလုပ်စိတ်စွဲပြီး ..အလုပ်ရူးကြီး ရူးကြသတည်း
ဆိုတဲ့ထိ ဘ၀ = အလုပ် ဆိုတာမျိုးလောက် မြှပ်နှံတတ်တာတွေ့တော့လည်း ..စိတ်ကုန်ပြန်ရော
ဒါတွေရေးဖြစ်တာ အကြောင်း ၂ခု ရှိပါတယ်။
ပထမ တခုက ခုတလော ရွာထဲကို ဂျပန်တွေ တဖွဲဖွဲ ၀င်နေပါတယ်။
Manufacturing, Mining, Energy, IT, Banking, Telecommunication, Automobil, Retails,
Transportation ကဏ္ဍ အစုံပါ… ။ သည်လူတွေ နဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါ သည်လူတွေ ဘယ်လို
သဘော သဘာဝ ရှိတယ် ဆိုတာ ခံစားနားလည်ဖို့ပါ။
ဒုတိယတချက်က ကျနော်တို့လည်း သန်းချီပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားထွက် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဆီလည်း ခုကနေစလို့ နိုင်ငံခြားသား သန်းချီ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ကြဖို့
ဟုတ်ကဲ့ ။ ဒါဆို ကျနော်တို့ လူမျိုးရဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကို ဆက်ဆံတဲ့ ကာလချာဟာရော..
ဘယ်လို ရှိပါသလဲ .. အပေါ်က ကေစ့်တွေမျိုး ဆာဗေး လုပ်ကြည့်ချင်သားဗျာ..။
မိတ်ဆွေရော ..နိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ .. ဘယ်လို ဆက်ဆံလိမ့်မလဲ
ဂျပန်ဆိုတာနဲ့ အာဂျီနိုမိုတို အချိုမှုန့်ကို ပြေးမြင်မိပါတယ်
ဂျပန်အစိုးရအနေနှင့် မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုမြင်တယ်တာ ပြောဘို့မခက်သလို
ဂျပန်ပြည်တစ်ခုသော ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ မြန်မာတွေ အတော်များများရှိဂျဘာသဒဲ့
တစ်နေ့ တိုက်ခန်းအောက်က အမှိုက်ထားတဲ့နေရာလိုမျိုးမှာ
မကြာပါဘူးအဲ့သည်ကက်ဆက်ပျောက်သွားပါတယ် ( ဆိုလိုတာက တစ်ယောက်ယောက်မ သွားဒယ်ပေါ့ )
ဒီလိုဘဲ မကြာဘာဘူး ပြန်ပျောက်သွားဗျန်ရော
မြန်မာအခန်း ဆယ်ခန်းရှိရင် ဆယ်ခါလောက် ပျောက်သွားလိုက် ပြန်ထားသွားလိုက်နဲ့
မြန်မာအခန်းစေ့အောင် ပျောက်မြင် ဇာတ်ထုတ်ကြီး အပတ်စေ့မှ
ဘယ်သူမှ မယူတဲ့အဆုံး အမှိုက်သိမ်းသမားက သိမ်းသွားတော့မှ
“American invents it.
Soviet steals it.
Japanese commercializes it. ” ဆိုတာပါ။
ဘယ်သူကပဲ ထွင်ခဲ့ထွင်ခဲ့ ဈေးကွက်ကိုရောက်အောင် ပို့နိုင်တာ ဂျာပွန်တွေလို့ ဆိုပါတယ်။ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ရဲ့ မာကတ်တင်းကျွမ်းကျင်မှုကို ပြောတာပါ။
ငလျင်ဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် စည်းကမ်းတွေ အထူးသဖြင့် အခြေခံကျောင်းစည်းကမ်းလေးတွေကို အားကျတယ်။
လေယူလေသိမ်း ကို စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်မိဘူး။
အစတို အစဖြတ်လေးတွေကနေ အိမ်တွင်းမှု လက်ဖြစ်လေးတွေ လုပ်တတ်တာကို သဘောကျတယ်။ အီကေဘားနား ၊ ဘွန်ဆိုင်း ဆိုတဲ့ အရာတွေအတွက်လည်း အံ့သြမိတယ်။
လက်မှုသင်ပေးတဲ့ ယာမဂျီးစံတယောက်နဲ့ လုပ်အားပေးလာတဲ့ ကျောင်းသားတွေပဲ ခဏဆုံဘူးတာမို့
သိပ်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင်မပြောတတ်ဖူး။ အလုပ်ကိုတော့ အင်မတန် ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဘာကိုပဲ လုပ်လုပ်ပါ။ကျမတို့နဲ့ ကွာပါတယ်။
Nippon wa monotzukuri တဲ့ဗျ
Marketing မဟုတ်ဘဲ production ဖြစ်ပါကြောင်း.
ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ပေါရရင်တော့ နိုင်ဂံဂျားသားဆိုတိုင်း စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံရဖို့လဲသိပ်မဟုတ်ဝူး။ ကိုယ့်ကာလချာသူတို့က မသိတော့ ဖော်ရွေတိုင်းလဲ အထင်ကြီးချင်မှကြီးမှာ။ လူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေကြောင့် ကိုယ့်လူမျိုးအပေါ် အထင်သေးမှာလဲမခံချင်ဝူးဗျ။
ဆိုတော့ ပုံမှန်ဆက်ဆံတာဘဲကောင်းပါတယ်။ ကျမတို့ရုံးက ဒတ်ခ်ျတွေကတော့ မြန်မာတွေဟာ Very Quiet & Silent လို့မှတ်ချက်ချပါတယ်။ မဆိုး မကောင်း အမြင်လား အဆိုးဘက်ယိမ်းတဲ့အမြင်လားတော့မပြောတတ်ဝူး။ ဒါတောင်ဗမာတွေက ဖော်ရွေ သဘောကောင်းတဲ့နေရာမှာ နံမယ်ဂျီးနော်။ အူးလေးတို့ဆီက ဂျာပွန်တွေလဲ ပုံမှန်ဆက်ဆံဂျဒဲ့လူဒွေများလို့ ဘာညာ ဘာညာ မှတ်ချက်တွေအပေးခံရတာနေမှာပေါ့။
အငုံ့စိတ် ကိုပြန်တူးဆွဖို့ လိုအပ်လာတယ်. မကြည်ပြာ
ကျုပ်တို့က. ကမ္ဘာကြီးက တဖက်. ကျုပ်တို့က တဖက် ဆယ်စုနှစ်များစွာနေလာကြတာ
တူတာတွေရှိမယ်. ယူရတာတွေရှိမယ်. ရှောင်ရမယ့် အမှားတွေရှိမယ်.
ထပ်ပြီး တူးဆွဖြစ်ဦးမယ်. ဗျာ.
ဂျပန်ရောက်စ.. ဂျပန်စကား.. “ဟိုက်”တလုံးတောင် မတတ်ခင်ကပေါ့…
အဲဒီမှာ.. ဂျပန်တွေအုပ်လိုက်.. စကားပြောတာထိုင်နားထောင်နေတဲ့ကျုပ်ကို.. ဂျပန်တယောက်ကလာမေးတယ်..
သူတို့စကားပြောတာ.. ဘယ်လိုမြင်သလည်း..နားလည်သလည်းပေါ့.. (ဘာသာပြန်နဲ့ပါ)
ကျုပ်က.. “နိဟွန်းဂျင်း”ဆိုတာ ဘာလည်းလို့ ပြန်မေးခဲ့တယ်..
သူတို့ပြောတာကို ..တလုံးမှနားမလည်ခင်မှာ.. သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲ.. အများဆုံးကြားရတဲ့စကားလုံးလို့.. ထင်မိလို့ပါ..
The Japanese People (日本人, Nihonjin, Nipponjin)
မြန်မာပြည်ကို ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်လွှမ်းမိုးထားတဲ့.. မြန်မာစစ်တပ်ဟာ.. အဲဒီခေတ်ကဂျပန်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကနေ အမွေရခဲ့တာပဲ.. အထက်က အောက်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့စိတ်ဓါတ်.. လေ့ကျင့်မှုလည်း အဲဒီကရတာပဲ..
လူဦးရေ အချိုး ၁% မပြည့်တဲ့ အိုင်နု လောက်ကလွဲရင်
ကျန်တာအကုန် နိပွန်းဂျင်းတဲ့ဗျာ. လူ သန်းပေါင်း. ၁၂၀ကျော်က
သည်တော့ nationalism ဖြစ်လာတာ မဆန်း. အစွန်းရောက်တော့
Communism တည်ဆောက်နိုင်တာ အဲ့သည့်ကမှ fascism ဖြစ်လာရတာလည်း မဆန်း
ကျုပ်တို့ဆီတော့ လူမျိုး ဆိုတာကို diversify အလုပ်ကောင်းလို့.
လူမျိုး ၁၃၅ မျိုး လောက်နဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ သဘော မတူညီခဲ့တာ.
အိုဘယ့် နှစ် ၁၀၀၀ကျိန်စာ
စည်းကမ်းရှိတာ အလုပ်ကြိုးစားတာ စနစ်ကျတာတွေ သဘောကျမိပေမဲ့
အလုပ်မှ အလုပ် ဖြစ်လွန်းပြီး မိသားစု ဘ၀ထက် အလုပ်ကို ပို ဂရုစိုက်လွန်းတာတော့ သဘောမကျဘူး
စာရေးသူရဲ့ ဂျာပွန်မလေးတွေအပေါ် အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်
သဘောအလွန့် အလွန် ကျ ပါကြောင်း။
ဒီလို အတွေး တွေ မျှလို့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း အတင်း ခါး ကို ညွှတ်ကာ၊ ညွှတ်ကာ တ ဟိုက်ဟိုက် နဲ့ ပြောပါတယ်။
ဂျပန် ဆိုရင် အရင်က အပေါ်က လူကြီး (သို့) လူငယ် ဘပု ပြောသလို အာဂျီနိုမိုတို ကိုသာ မြင်ပါသည်။
အခုတော့ ဂျပန် ဆိုရင် “မင်း ရဲ့ မျက်နှာ” ကို ပြေးမြင်ပါသည်။
“မိတ်ဆွေရော ..နိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ .. ဘယ်လို ဆက်ဆံလိမ့်မလဲ” ဆိုတာ ဖြေ ရရင်
သူ ဆက်ဆံသလို ကိုယ်က ပြန် ဆက်ဆံ မည် ဟု ထင်ပါသည်။
(ငယ် တုန်းက နိုင်ငံခြားသား နဲ့ မသိဘူး လို့ပါ)
ပြင်ပ မှာ နေလာချိန် ထိတွေ့ရသူ ၃မျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
(၁) လမ်းမှာ ဖြတ်ကနဲ တွေ့သူများ
(၂) ပြင်ပ မှ သိသူများ (အိမ်နီးချင်း၊ အသိ ရဲ့ အသိ၊ ဈေးဆိုင် မှလူများ)
(၃) အလုပ် ထဲ က သူများ
(၁) အမျိုးအစားကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ခဏ တွေ့ရသမို့ သူ့ဟာသူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က ယဉ်ကျေး ပေးလိုက်ဖို့ လွယ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ဝင်တိုက်မိရင် ဘယ်သူမှားမှား ကိုယ်က ဦးအောင် တောင်းပန် လိုက်တာ။
ဒီ အာရှ မိန်းမ ယဉ်ကျေးတယ် လို့ ပြနိုင်ဖို့ အထူးကြိုးစားပြီး ယဉ်ကျေး ပြပါတယ်။
(၂) အမျိုး အစားက (၁) လောက် မလွယ်ပေမဲ့
တွေ့ သူ က ယဉ်ကျေးသူ ဆို ကိုယ်က ပြန်ယဉ်ကျေး၊ ရိုင်းလို့မျက်နှာကျော မတည့် ရင် မသိမသာ ရှောင်လို့ ရတယ်။
ပြသနာ က (၃) မှာ
မဆက်ဆံချင်ရင်လဲ တာဝန် အရ ဆက်ဆံ ရပါမယ်။
အမှန်တော့ မြန်မာဖြစ်ဖြစ်/ ဘယ်နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းသင်းရကောင်းတဲ့ သူရှိသလို၊ ဂေါက် တွေ လဲ ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ သဘာဝ ပါဘဲ။
ကိုယ်တွေ့မိလိုက်သူ နဲ့ ဘဲ အားလုံး ကို ခြုံ ပြောနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
နောက် အမှန်တရား တစ်ခု ကလဲ အလုပ်မှာ ရာနှုန်းပြည့် ကောင်းသူတွေ မရှိတာ သေချာပါတယ်။
တစ်ချို့ အလုပ်ကို ခိုချင်တယ်၊ တွက်ကပ်ချင်တယ်၊ ကိုယ် အသုံးမကျတာကို ဖုံး ဖို့ သူများ ကို လွှဲချမယ်။
ဒီလို လူမျိုးတွေ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် စိတ်ဓာတ် ရှိသူ တွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဂေါက် သမား တွေ နဲ့ အလုပ်လုပ် ချိန်မှာ ကိုယ်က လျှော့ပြီး သည်းခံ နေရင်လဲ မဖြစ်။
သူနဲ့ ပြိုင် ဂေါက် နေလို့ ကတော့ အလုပ် ပြီးမှာ မဟုတ်။
အဲဒီ တော့ ချော့တစ်ခါ၊ တင်းတစ်လှည့် နဲ့ ခရီးသွားရပါတယ်။
တစ်ခု တော့ ရှိရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြောအဆို၊ အလုပ်အကိုင် ကတော့ တတ်နိုင်သ၍ ရိုးသား နေဖို့ ကတော့ လိုမယ် လို့ ထင်တာပါဘဲ။
(ဆရာ)ဖေမြင့် ရဲ့ နှလုံးသားအာဟာရ ရသစာများ ၂ မှ ကောက်နှုတ်ထားတာလေး နဲ့ မဆိုင်တာကို ဂလိုင် ဝင်ခေါက် လိုက်ပါရစေ။
မြို့တစ်မြို့၏ အဝင်တံခါး နား ခရီးသွားတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။
မြိုထဲမ၀င်ခင် တံခါးနားမှာ ထိုင်နေသည့်အဖိုးအို တစ်ယောက်ကို
“ ဒီမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေ ဘယ်လို စိတ်သဘောထားမျိုး ရှိကြသလဲ” လို့ မေးတယ်။
အဖိုးအို က ” လူကလေး ထွက်လာခဲ့တဲ့ မြို့က လူတွေကော ဘယ်လိုသဘော မျိုးရှိကြသလဲ” ဆိုပြီး ပြန်မေးလိုက်တယ်။
“ဆိုးပဗျာ အင်မတန်မှ ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ လူတွေ၊လုံးဝလုံးဝ ယုံကြည်လို့မရတဲ့ လူတွေ၊ကောင်းကွက် ဆိုလို့ တစ်စက်ကလေးတောင်မှ မရှိတဲ့ လူတွေ”
သူ က မဲ့မဲ့ ရွဲ့ရွဲ့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
“အင်း ဒီမြို့ က လူတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အဲဒီပုံစံ အတိုင်းပဲ တွေ့ရဦးမှာပါ ” လို့ အဖိုးအိုက ဆိုလိုက်တယ်။
မကြာမီဘဲ နောက်ခရီးသည် တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး အဖိုးအို ကို
“ ဒီမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေ ဘယ်လို စိတ်သဘောထားမျိုး ရှိကြသလဲ ဆိုတာ အဖိုးပြောနိုင်ပါသလား ခင်ဗျ” လို့ မေးပြန်တယ်။
အဖိုးအိုကလဲ ပထမခရီးသည် တုန်းကလိုဘဲ သူလာခဲ့သည့် မြို့ အကြောင်းမေးပြန်ပါတယ်။
“အင်မတန် စိတ်သဘောထား ကောင်းကြပါတယ်ဗျာ၊ ရိုးသားတယ်၊ အလုပ်ကြိုးစားတယ်၊ သူမတူအောင်လဲ ရက်ရောကြတယ်၊
ကျွန်တော် အဲဒီကထွက်လာတာ စိတ်မကောင်းဘူး ”
လို့ ဒုတိယခရီးသည်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေသံဖြင့် ပြောပါတယ်။
“ရှေ့က မြို့ထဲမှာလဲ အဲလိုလူမျိုးတွေပဲ လူကလေး ထပ်တွေ့ရမှာပါ ” လို့ အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ဆီက ယူစရာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်
ကိုယ်ပိုင်မူပြောင်း ယူရမှာလည်း တပုံတခေါင်း
ဂျပန်ဆိုရင် အရင်ဆုံးသတိရတာက ဂျပန်ပါးရိုက်နည်း
ဟီး ဟီး .. နောက်တာ ဒီနေ့မြင်မြင်သမျှ ဂျစ်ချင်နေလို့ ..
တစ်ချို့က ပါး ကို နှာခေါင်း နဲ့ ရိုက်သတဲ့။
အဲဒီ ဂျာပွန် နားကို သိတ်မကပ် နဲ့ သမီး။ ;-)
စိတ်ထိခိုက်သွားပြီး ၇ရက်၇နှစ်လီ ငို မဆုံး ရင် ပြသနာ။
တူ့ ဟာတူ ဂျစ် လို့
မနေမထိုင်နိုင်ပဲ လာဝန်ခံတာပဲ အရီးရယ်.
နာသကွာ. ကိုယ့်အလုံးနဲ့ ကိုယ်ဆော်ခံထိတာ.
အော်. ဟစ်စပန်းနျတ် တွေ ယူပေးတဲ့ S II
လေးဟာ ခုဆို စတုပစ် သက်သေခံလေးဖြစ်နေသမို့
အရပ်တိုတာလို ၆လက်မဒေါက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရစကောင်းဘူးရယ်
ဂျပွန်ဆို.. ဂျပွန်တွေက နေကို ကိုးကွယ်တာဆို
ဟုတ်ရား..။ ။ ဂျပွန်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တော့လေးစားပါဒယ်..။
အပြုံးမပျက် ဂျပန်မလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း လေးချားပါဒယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဒက်ဇက်ကြီးကို ဂျစ်ကြောက်လျက်ပါဂျာ…
ဇိမ်ဖုံးဂျီးတွေကို. မေးကြည့်ပါလားဟင်င်င်င်င် ဟီးးး
မြန် မာ ကို သွား ကို သွား မဲ့ ဂျပန် ကုပ္ပဏီ အထောက် အကူ ပြု အဖွဲ့ ၂/၃ ဖွဲ့ နဲ့ ဒီ ကာလအတွင်း တွေ့ ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန် မာ ကို မသွားခင် မြန် မာ ဆို တာ ဘယ် လို လဲ သိ ချင် လို့ ပါ။ သူ တို့ က တော့ အဲ လို မ ပြော ပါ။ ဆွေး နွေး ချင် တယ် တွေ့ ကြ ရ အောင် ဆို ပြီး တွေ့ ပါ တယ်။ အထောက် အကူ ပြု အဖွဲ့ ဆို တော့ E ကောင်း ပါ တယ်။ ဂျပန် ကုပ္ပဏီ တွေ မ သွား ခင် သူ တို့ အ ရင် သွားမှာ ပါ။ သူ တို့ တွေ က ဖွံ့ဖြီုး ဆဲ နို င် ငံ တွေ နဲ့ ပတ် သတ် ပြီး Experience တော် တော် ရှိ ပါ တယ်။ Cambodia, Vietnam, LaOs, etc… except Myanmar မှာ အ လုပ် လုပ် ဖူးကြ ပါ တယ်။ ကျတော် က မေး ပါ တယ် အဲ ဒိ နို င် ငံ တွေ မှာ ဘယ် လို နေ လဲ ဆို တော့ တော် တော် အခက် အခဲ တွေ့ ပါ တယ် တဲ့။ သူ တို့ တွေ့ ရ တဲ့ အခက် အခဲ က rule and regulation ပါ။ အ များ ကြီး ပါ ပြော တာ။ အ ခု တစ် မျီုး တော် ကြာ တစ် မျီုး အခက် အခဲ တွေ့ ပါ တယ် တဲ့။ ကျတော် က ပြန် ပြော လိုက် ပါ တယ် မပူ ပါ နဲ့ ထပ် တွေ့ ပါ လိမ့် မယ် လို့။ ဆို လို တာ က သူ တို့ စေ့ စပ် သေ ချာ ပါ တယ်။
Post ပိုင် ရှင် အ တွက် comment ပေး ရ ရင် Japan တွေ က နည်းနည်း pretending ဖြစ် တယ် လို့ ကျ တော် ကိုယ် ပိုင် အမြင် နဲ့ ပြော ပါ ရ စေ။
အဲ့အဖွဲ့ သွားပြီးမှ. ဝါ. အသေးစိတ် ဆာဗေးလို ဟာမျိုးထွက်ပြီးမှ
သွားဖို့ စောင့်နေသူ တပုံတပင်ရှိနေသလို
လက်ဦးမှု ရယူဖို့အတွက် ကြိုသွားကြသူတွေလည်း မနည်းဘူး ဆိုတော့
သူတို့ အတွက်. လူသန်း ၆၀လောက် ဘွားကနဲ သွားတွေ့တာလေဗျာ.
လုံးဝ ဗာဂျင် မားကတ်ကလေး
အင်ဖရာတွေ ဘာတွေ စုတ်တာ ထားဦးတော့.
ကျုပ်တို့ဆီက ချာတိတ်တွေအတွက်. နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားလေ့လာမှု နံပါတ်၃. ရှိတဲ့ ဘာသာ ဖြစ်နေတော့သကိုး
အင်းဂလိ က ၁ ဗျာ ချိုင်းနိစ့်က ၂. အဲ့. သဒ္ဒါ တူတဲ့ ဂျာပန်က ၃ တဲ့ဗျ. စာရင်းတွေကပြောပါတယ်
ကမ္ဘာမှာ သူတို့ စာကို သည်လောက်
စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာမယ့် လူငယ်ထု ရှိတဲ့တိုင်းပြည် မရှိသလောက်ကိုး.
အဲ့သည့် ကနေ ဘစ်ဇနက် ဒူးကြလေသတည်းပေါ့ဗျာ
ဂျပန်အခြေစိုက် Marubeni Aerospace Corporation မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ Hiroshi Ikuno နဲ့ မြန်မာ အစိုးရ ပို့ဆောင် ရေး ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်တို့ဟာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ကို မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ က ဆိုထားပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရက သစ်တောထိမ်းသိမ်းရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အဏ္ဏ၀ါဗေဒ၊ ရာသီဥတု စတဲ့ ကဏ္ဍတွေအတွက် မြန်မာ ကို အကူ အညီပေးရေးဆိုင်ရာ အသေးစား မြေကမ္ဘာလေ့လာရေး ဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်တွေဖလှယ်ဖို့ အလုပ် ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒီအပြင် ဂျပန်က အာကာသ သိပ္ပံဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ လေ့လာသင်ယူဖို့လည်းသူတို့ တက္ကသိုလ်တွေကနေ တဆင့် အကူအညီပေးအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်း သတင်းတွေအရတော့ ဂြိုလ်တုလွှတ်တင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါတဲ့ ဗဟိုကော်မတီ တခုဖွဲ့စည်းထားပြီး အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးပါတဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလာတုန်းက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အားပေးတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပေးဖို့ ရှိတဲ့ အကြွေး ဂျပန် ယန်းငွေ ဘီလျံ ၃၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၆၈ ဘီလျံ) ကိုလည်း လျှော်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါသေးတယ်။
ကျန် သွား လို့ ထပ် ပြော ပါ ရ စေ။ ဂျပန် ရေ ချိုး နည်း လဲ ကြိုက် ပါ တယ်။ ဂျပန် စ တိုင် Hotel ရောက် ရင် Onsen (hot spring) က နေ မ ထွက် တော့ ပါ ဘူး။
မိတ်ဆွေရော ..နိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ .. ဘယ်လို ဆက်ဆံလိမ့်မလဲ…
ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဆက်ဆံမှု မရှိသလောက်နည်းလို့ မသိပေမယ့်….
ကိုယ်ကလည်း မတရားမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့
ကိုယ့်ကို မတရားလုပ်တယ်လို့ ယူဆရင် အမှန်တရားရအောင်ပြန်လိုချင်စိတ်နဲ့ အသည်းအသန်ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။
ခုတော့လည်း….. ဦးပါပြောသလို ပျောက်ဆုံးနေသောကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်ချောင်ထဲ သွားရှာရမယ်မှန်း မသိတော့ဘူး။
သများက တိုတိုဂီ့လို အရှေ့ကျွန်းမရောက်ဖူးတော့ အဲ့ကျွန်းကလူအများကြီးနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုနည်းဘာဒယ်
သများအလုပ်လုပ်ရာ ကန်ပနီထဲက ဂျာပွန်တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စကိုကြည့်ပြီး ပွားရရင်…………….(ဒန်တန့်တန်)
“””စည်းကမ်း သေ၀ပ်တာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နဲ့ ပါဆင်နယ်ကွဲပြား တာကို တွေ့ရပြန်တော့
ကျနော်တို့ လူမျိုးနဲ့ မတူရန်ကော ဆိုပြီး လေးစားမိပြန်ပါတယ်..”””
ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အဲ့လာဟုတ်တယ်
ပီးလော့၊ သများတို့ MDနဲ့ GM သယ်တဲ့ခုံပေါ် ထိုင်ခဲ့ရသတော့ ဟိ
သများတို့ အိုတီဆင်းကြတဲ့ညဖက်ကြီးမှာ အခန်းတစ်ခုထဲ ခုံတွေရွှေ့ဖို့ရှိလာတော့ MDကြီးဒူးရင်သီးရယ်၊ GMကြီးမြွေဟောက်ရယ်က ချွေးတလုံးလုံးနဲ့
သများတို့ထဲက ယောက်ျားလေးတွေက ကူလုပ်ပေးပါတယ်
အဲ့လာ ဒူးရင်းသီးကြီးက မလုပ်ပေးနဲ့တဲ့၊ ကိုယ့်အလုပ်သာ လုပ်နေပါတဲ့
သများတို့က နိုးဟင်းအတွက် အိုတီဆင်းနေတာလေ ဟိဟိ
ခုရုံးမှာလည်း (သများရဲ့ဂျာကြီးမပါ) တဖက်ကန်ပနီက စီအီးအိုနဲ့ မန်နေဂျာက တံမြက်စည်းအတင်းလှည်းသတော့
ပီးလော့၊ လက်အောက်ငယ်သားကို စွန်းခဲrespectပေးတယ်
ငါအထက်လူကြီးပဲဆိုပီး အထက်လူကြီးစတိုင် အပြည့်မယူဘူးရယ် (ရှင်းပြတတ်ဘူး)
မိုရှိဝါခဲနိုင်းသက်စခဲဒို ဆိုပီး အားနာနာနဲ့ပဲဆိုတဲ့ စကားလေးစလိုက်ရင် သူတို့တခုခုအပိုခိုင်းတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပီ
ခုရုံးမှလည်း ဒူးရင်သီးကြီးနဲ့ပြန်တွေ့တော့ သများကို ငယ်နိုင်လိုသဘောထားတယ် အစ်အစ်
ပီးလော့၊ သူရို့နိဟွန်းဂျင်းတွေက မြန်မာဂျင်းတွေထက် ပိုအဆင့်မြင့်တယ်လို့ စိတ်ရှိကြပုံပဲ
အချိန်ရော ငွေရော ဘာဆိုဘာမှ အလဟဿ တရွေးသားမှ အပဲ့မခံဘူး (အဲ့လာက သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးရာအတွက်ဖြစ်သလို၊ ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း အဲ့လို)
အားနာပေးမယ့်လည်းဆိုတဲ့စကားကို တွင်တွင်သုံးပေမဲ့ သူတို့အတွက်အသုံးမလိုရင်တော့ အားမနာလျှာမကျိုးဘူးတော့
့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို အသုံးမတည့်တော့ရင် အရင်က အဲ့ဝန်ထမ်းဘာလုပ်ပေးခဲ့ပေးခဲ့ ခုဘိခိလိ(အလုပ်ဖြုတ်)တာတော့ ရက်စက်ပါတယ်
ဂျာပွန်မ လှလှလေး တယောက်တော့ လိုချင်စမ်းပါဘိ..။ ရမှ ရေတဝဂျီး ချိုးပစ်လိုက်မယ်…
ဂျာပန်ရောက်နေတဲ့ ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်းတွေကို မှတ်ချက်ချထားတာလေးများရှိရင်လည်းသိချင်သား
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို နိုင်ငံတကာလူမျိုးတွေအမြင်ဖြင့် ဖော်ပြထားတာပဲ …. ဂျပန်ပြည်ဆိုရင်တော့ ဖူဂျီတောင်ကြီးကိုသွားချင်တယ် ချယ်ရီပန်းတွေလှတာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ် … ဒါပေမယ့် ပြောသံကြားတာတော့ ငလျှင်လှုပ်လို့ အလုပ်တွေ စက်ရုံတွေမှာဆိုရင်တော့ မကြာခဏတလှုပ်လှုပ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်တဲ့ … ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကတော့ အကျင့်ရနေပေမယ့် ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကတော့ ငလျှင်မကြာခဏလှုပ်တာခံတော့ ဦးနှောက်ခပ်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတာသေချာတာတော့ လက်တွေ့ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဗျို့ ……
အဲ့လူတွေထဲ တိုတိုဂီ အကြောင်ဆုံး